Home Wararka Madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo tegay furumaha dagaalka (Sawiro)
Madaxweynaha maamulka Soomaaliland oo tegay furumaha dagaalka (Sawiro)
Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta tagay deegaanka Tukaraq oo ciidamada Somaliland ay kula dagaalameen ciidamada Puntland.
Dhaqdhaqaaqa maalmahaan uu ka waday gobolka Sool ayaa dareen ku abuuray Puntland, waxaana ay walaac ka muujiyeen socdaalka uu ku tagay magaalada Laascaano ee gobolka Sool.
Taliyaha ciidamada Somaliland oo saxaafadda kula hadlay aagga dagaalka Tukaraq ayaa madaxweyne Muuse Biixi, warbixin ka siiyay xaaladda guud ee deegaanka iyo ciidamada ku sugan farumaha dagaalka, waxaana uu kaga mahadceliyay safarkiisa.
Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland Ciise Axmed Yuusuf oo wafdiga qeyb ka ahaa ayaa amaanay ciidamada Somaliland ee ku sugan Tukaraq, waxaana uu sidoo kale sheegay in safarka madaxweynaha uu yahay mid dhiirgelinaya ciidamada Somaliland.
“Hawshaas aad gashaan haku coloolyoobina, haddaad aragtaan guryihiinna iyo dadkiinna oo dayacan haku caloolyoobina, samaha aad gelaysaan, nafta aad u huraysaan iyo dalka waxa aad u qabanaysaan Ilaahay meel kaluu idinka siinayaa markaad si wanaagsan u gudataan, markaa dhibta aad qabtaan dheef-yaraanta jirta iyo hawsha marnaba shaydaanku yuu idinka wisiisiyin,” ayuu yiri madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi.
[su_slider source=”media: 333830,333829,333828,333827,333826,333825″ target=”blank” width=”660″ height=”580″]
Previous articleParliamentary Budget Committee investigations expose the corruption of the government of Farmaajo
Next articleHaweeney Ingiriis ah oo lagu xayiray garoonka Muqdisho iyo xiisada ka dhex dhalatay Fahad iyo Kheyre (Xog)
VIDEO:-Cali Maxamed Geedi oo u muuqda mid lagu amray ka...
Farmaajo oo amray in la weeraro, lana soo xiro Saadaq Joon?...